အရှင်ဘုရားသို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Poetry » အရှင်ဘုရားသို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
Posted by ခရီးသည်ကြီး on Jun 21, 2013 in Poetry | 24 comments
မမြဲ ၊ ဆင်းရဲ ၊ အစိုးမရ
အရှင်ဘုရားးးး ….. သတိထားတော်မူပါ
ရုပ်နာမ် ဓမ္မ သခါင်္ရတွေကို
မြဲ ချင်နေသလား ဘုရာ့
စိုးမိုးထား ချင်တာလား ဘုရာ့ 
သူဌေး ၊အနူ ၊ သမတ
ရုပ်၊ နာမ် တွေဘဲမဟုတ်လားဘုရာ့
အတ္တာဟိ အတ္တရော နာထော
မမေ့ မလျော့ မပေါ့မဆ
မဖြစ်ပါရစေနဲ့ ဘုရား ……
ဆင်ခြင် တော်မူပါ ဘရာ့ ….ဘုရားးးးးး …။
ခရီးသည်ကြီးရဲ့ လွယ်အိတ်ထဲက မှတ်တမ်းများကို ကူးယူပြီး
ကျုပ်ရဲ့ ကျောပိုးအိတ်ထဲ ထည့်ထားလိုက်ပါသဗျားးးးးးးးးးးးးးးးး
ကျွန်တော်က တော့ ခရီးသည်ကြီးရဲ့ လွယ်အိတ်ထဲက မှတ်တမ်းများကို
စာအုပ် ထဲ ထည့် သိမ်းလိုက်ပါတယ် ။
ခရီသည်ကြီးရဲ့ မှတ်တမ်းကို သိနိုင် ဖတ်နိုင် မှတ်နိုင် ဆင်ခြင်နိုင်ကြအောင်လို့ စာမျက်ခွက်မှာ ရှဲလိုက်ပြီ။
မီးမီးလဲ မမလိုပဲ စာမျက်ခွက်ကြီးတွင်ရှဲလိုက်ပါကြောင်း။
သခင်​မိုဘိုင်း ၊ ကိုအလင်းဆက်​၊ ​အစ်​မကြီး ​ဒေါ်မမ နဲ့ TNA ခင်​ဗျ
လာ​ရောက်​ဖတ်​​ပေးတာ​ရော သိမ်း​ပေးတာ​ရော ရှယ်​​ပေးတာ​တွေအတွက်​ပါ ​ကျေးဇူးအနန္ဒပါဗျ ။
စိတ်​တူ သ​ဘောတူ သူများလို့ထင်​မိပါတယ်​။
သတိတရ နဲ့ ဝင်လာတဲ့ ခရီးသည်ကြီးရေ။
အဖိုးတန်မှန်ကန်တဲ့ စာသားလေးတွေ ရဲ့ အနှစ် ကို ဖတ်ရင်း သာဓု၊ သာဓု၊သာဓု ခေါ်ပါတယ်ရှင်။
သူ့ထိုက်သူ့ကံ – “သဗ္ဗေသတ္တာ ကာမသကာ” မဟုတ်ဘူးလား ဖျာ့၊
“အတ္တာဟိ အတ္တရော နာထော” – မိမိ ကိုယ်သာကိုးကွယ်ရာ လို့ ကိုအံ့ကြီး သီချင်းမှာ ပါတယ်။
လို့ ဆိုပြီး စာ​​ကြောင်းသပ်​သပ်​ ခွဲခဲ့ရမှာဗျ
အား​ပေး​ထောက်​ပြတာလည်း ဝမ်းသာတယ်​ဗျ ။
ဘူဘာပြောပြော တို့အူးဇင်းကတော့ တိုင်းမဂ္ဂဇင်းမှာ မှတ်တမ်းဝင်ဖစ်သွားဘီ…
ဖတ်ယူ မှတ်သား သွားပါတယ် ရှင့့်
မင်္ဂလာပါ WOW နဲ့ ည​လေး ခင်​ဗျ
အော်…ခုတလောကြားနေ မြင်နေရ တွေ့နေဖတ်နေရ သူတို့အကြောင်း တွေကြီးပါပဲ..ကမ္ဘာမှာရော.မြန်မာမှာရော..အလှည့်ကျလာလို့လားမှ မသိ
ခရီးသည်ကြီးရေ.အရာအားလုံးဟာ ဆုတ်နေတာပါ အနှေးနဲ့ အမြန်ပါပဲ….လူတွေလုပ်ရမဲ့ အလုပ်ကို ဘုန်းကြီးတွေ က၀င်ကူနေတာ
လူတွေနဲ့ တင် မပြီး လို့ ဘုန်းကြီးတွေ ၀င်ပါနေရတာ….ကျွန်တော် တို့သာသနာ အဆင်းမှာအရှိန်လျော့အောင်ဆွဲပေးနေတာလားလို့…။
ဆုပ်​ကပ်​လို့ ဆို​သော်​လည်း ​စော​နေ​သေးလားလို့ဗျာ
ဘာည ဘာညာ လွှဲမချချင်​ဘူး
ပရိယတ်​ ပတိပတ္တိ နှစ်​မျိုးသာ ​ဆောင်​ရွက်​သင့်​ပါတယ်​
ဗုဓ္ဒ ဘာသာဟာ မြန်​မာလူမျိုးကို ကိုယ်​စားပြုတာမှမဟုတ်​ပဲ
မည်​သည့်​လူမျိုးမဆိုကိုးကွယ်​နိုင်​သလို ဘယ်​သို့​သော လူမျိုး​​ရေးနဲ့မှ မ​ရော​ထွေးသင့်​ဘူး​လေ
လူ​တွေမလုပ်​နိုင်​လို့ ဘုန်းကြီးဝင်​လုပ်​တယ်​ဆိုတာ နား​ထောင်​လို့​ကောင်း​ပေမယ့်​ ဘုရားအလိုနဲ့​တော့ညီမယ်​မထင်​ဘူး
မြန်​မာပြည်​မှာမကွယ်​ချင်​ရင်​ ဒီက သံဃာ​တော်​​တွေမှာ တာဝန်​ရှိတယ်​
နိုင်​ငံသားစိတ်​ကို မလုံ့​ဆော်​ပဲ ၊ လူမျိုး​ရေးစိတ်​ကို လှုံ့​ဆော်​​နေသ၍
ကျုပ်​တို့နိုင်​ငံ ​နောက်​က​ရေရင်​ ၁ ဘဲဖြစ်​​နေမှာ
လူမျိုး​ရေးခွဲခြားမှုကို နိုင်​ငံအသီးသီးကလည်း အမြင်​ကျဉ်းတယ်​လို့သ​ဘောထားကြပြီ​လေ
“ရုပ်နာမ် ဓမ္မ သခါင်္ရတွေကို
စိုးမိုးထား ချင်တာလား ဘုရာ့ ” ကြိုက်တယ်ဗျာ
“အတ္တာဟိ အတ္တနော နာထော” ကွိကွိ
‘ဒီနှစ်တန်ခူးအတာကူးပြီးလို့ နှစ်သစ်ရောက်ရင် ဒို့တိုင်းပြည်ကြီး တိုးတက်တော့ မယ်’ လို့ ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါး မိန့်ကြားထားတာကြောင့် နှစ်သစ်ကို မျှော်လင့်ချက်အသစ်တွေနဲ့ ယုံကြည်စွာ စောင့်မျှော်နေမိပါတယ်။ နှစ်ဟောင်းကုန်ခါနီး မှာတော့ မိတ္ထီလာအရေးအခင်းက စခဲ့တဲ့ မြန်မာပြည် အလယ်ပိုင်းနဲ့ ပဲခူးတစ်ဝိုက်က အရေးအခင်းတွေကြောင့် ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ ကဲ့ရဲ့စရာ အဖြစ်မျိုးတွေတော့ ကြုံခဲ့ရတာပေါ့ဗျာ။ ဥပဒေဘောင်အတွင်းကပဲ ဖြေရှင်းကြဖို့ ၀ိုင်းဝန်းတိုက်တွန်းကြတာကြောင့် ”တကယ်ပဲ လက်ရှိဥပဒေတွေ အတိုင်းဖြေရှင်းရင် လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ ကိစ္စတွေအားလုံးပြေလည် သွားမလား၊ လက်ရှိဥပဒေတွေက ကိုယ့်တိုင်းရင်းသူတွေကို တကယ်ပဲ ထိထိရောက်ရောက်ကာကွယ် နိုင်သလား၊ မွတ်တွေရဲ့ လူမျိုတိုက်စစ်ကြီးကို ကာကွယ်နိုင်ရဲ့လား” လို့ စဉ်းစားမိပါတယ်။ တကယ်လို့ လူမျိုတိုက်စစ်ကြီးကို မကာကွယ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ လိုအပ်တဲ့ ဥပဒေအသစ်တွေကို အခြေခံ ဥပဒေတွေပြင်ဆင်ရေးဆွဲခြင်း နှင့် အတူ ပြင်သင့်တာပြင်၊ အသစ်ရေး သင့်တာကိုရေးပြီး ပြဋ္ဌာန်းကြဖို့ လိုအပ်မယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်။ ကျွန်တော် တို့လို ပဲ မွတ်စလင်တွေနဲ့ အတူနေရပါလျက်နဲ့ မွတ်တွေဝါးမျိုတာကို မခံရတဲ့ စင်ကာပူဟာ ဘယ်လိုအစီအမံတွေကြောင့်လဲ ဆိုတာကို ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။
ပထမ ROM လက်ထပ်မော်ကွန်းရုံးက မွတ်စလင်မှ လွဲလို့ အခြားသော ဘာသာဝင်တွေအားလုံးကို လွတ်လပ်စွာ လက်ထပ်ပေးတဲ့ တရားရုံးပဲဖြစ် ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ အချင်းချင်းသော်လည်းကောင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ နဲ့ ခရစ်ယာန်သော်လည်းကောင်း၊ ခရစ်ယာန်နဲ့ ဟိန္ဒူကိုသော်လည်းကောင်း … ကျန်ဘာသာတွေအားလုံး လွတ်လွတ်လပ်လပ် လက်ထပ်ခွင့် ရှိပါတယ်။
အဖြေက ‘လက်ထပ်ခွင့် မရှိ’တဲ့.. ။ ဒါကိုမှ လက်ထပ်ချင်ရင် နည်း ၂ နည်းတော့ ရှိပါတယ်။
.. ဟာ … ဒါဆိုဘာထူးမှာလဲကွာ .. မွတ်က ဗုဒ္ဓုဘာသာအမျိုးသမီးကို မွတ် ဘာသာထဲ ၀င်ခိုင်းပြီး လက်ထပ်မှာပေါ့ကွာ လို့ စောဒကတက်နိုင်ပါတယ်။ .. ဒီလိုရှိပါတယ် ..။ ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာ ကျတော့ မွတ်က မြန်မာမ တစ်ယောက် ကို ”လူကိုပဲယူပါ။ ယူပြီး မင်းလည်းမင်းဘာသာကို ကိုးကွယ်၊ ငါလည်း ငါ့ဘာသာကို ဆက်ကိုးကွယ်မယ်” ဆိုပြီး လက်ထပ်ပါတယ်။ ယူပြီးနည်းနည်း ကြာမှ နည်းမျိုးစုံးသုံးပြီး မွတ်ဘာသာထဲ ၀င်ခိုင်းတယ်ပေါ့ဗျာ။ ဒီအချိန်မှာ နှိပ်စက်ရင် တရားရုံးမှာ တိုင်နိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် … ဒီအခြေအနေရောက် မှတော့ တိုင်ပါတော့မလား …။
တိုင်လိုက်လို့ ဖမ်းပြီဆိုရင်တောင် သူ့ရဲ့ ပကတိအပျိုစင်ဘ၀ကို ပြန်ရပါဦး မလား? ဒီတော့ ဒီအခြေအနေရောက်မှတော့ မတိုင်တော့ဘူးပေါ့ဗျာ… သူတို့ဘာသာထဲပဲ ၀င်လိုက်တော့တာပေါ့။ တကယ်တော့ မွတ်စလင်အမျိုးသား တစ်ယောက်က သူ့အမျိုးသမီးက အခြားဘာသာ ဖြစ်နေရင် မွတ်ဘာသာထဲကို ရအောင်သွတ်သွင်းရပါတယ် .. မသွင်းနိုင်ရင် သူဟာတာဝန်မကျေဘူးပေါ့ဗျာ။
ဒါဆို .. ဟုတ်ပါပြီ .. မွတ်အချင်းချင်း ၄ယောက်ယူပြီး လူနဲ့ မျိုမယ်ဆိုရင်ကော ?? … ဆိုတော့လည်း .. အလွယ်တကူ နောက်တစ်ယောက်ထပ်ယူလို့ မရအောင် ဥပဒေကို ပညာသားပါပါ ပြဋ္ဌာန်းတားမြစ်ထားပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ROMM မွတ်စလင်လက်ထပ်မော်ကွန်းရုံးကို MUSLIM LAW ACT နဲ့ အုပ်ချုပ်ပါတယ်။ မွတ်တွေကို ၄ ယောက်ယူခွင့်ပေးတယ်ပေါ့ဗျာ … ဒါပေမယ့် တကယ်ယူဖို့ မလွယ်ဘူး။ နောက်တစ်ယောက်ယူချင်တယ်ဆိုတာနဲ့ နောက် တစ်ယောက်ကို ကျွေးနိုင်လောက်အောင်ချမ်းသာကြောင်း ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ အကုန်ပြရပါတယ်။ ဒါဟာ ဘာကို တားလိုက်တာလည်း ဆိုတော့ သာမာန် လူတန်းစားနဲ့ ဆင်းရဲသားမွတ်တွေ နောက်မိန်းမယူခွင့် မရှိဆိုတာကို သွယ်ဝိုက်သောနည်းနဲ့ တားလိုက်တာပါ။ ယူခွင့်ရှိတဲ့ မွတ်အရေအတွက် အလိုအလျောက်နည်းသွားတာပေါ့ဗျာ။
ဒါဆိုသူဋ္ဌေးမွတ်တွေ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ယူမှာပေါ့ ဆိုပြန်တော့လည်း … ဒီလို ‘ထစ်’ထားပြန်တယ်။ နောက်တစ်ယောက်ယူမယ်ဆိုတာနဲ့ တရားရုံးမှာ လျှောက်ရပါတယ်။ ဒီအခါမှာ တရားရုံးက ဘာလုပ်သလဲဆိုတော့.. Kadi လို့ ခေါ်တဲ့ အရာရှိက .. ပထမ မိန်းမရော၊ နောက်ယူမယ့် မိန်းမကော နှစ်ယောက်စလုံးကို သီးခြားစီခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီး အသေးစိတ် အင်တာဗျုးပါတယ်။
ဆိုတာတွေကို ခရေစေ့တွင်းကျ မေးတယ်ပေါ့ဗျာ။ သူက ‘NO’ ဆိုရင်ယူခွင့် မရှိပါဘူး … ဘယ်လိုလဲ? မွတ်မတွေ သိပ်သဘောထားကြီးမယ်ထင်သလား? ကျွန်မယောက်ျား နောက်မိန်းမတစ်ယောက်ထပ်ယူမှာကို သိပ်ပျော်တာပဲလို့ ဖြေမယ်ထင်သလား? …
အိုစမာဘင်လာဒင်ကို ခြေရာခံမိသွားတာဟာ သူ့ရဲ့ ပထမ မယားကြီးရဲ့ သတင်းပေးချက်ကြောင့်ပါလို့ စီအိုင်အေအရာရှိတစ်ဦးက ၀န်ခံ ပြောဆိုသွား ခဲ့ပါတယ်။ အငယ်ဆုံးမိန်းမကို ဂရုစိုက်လွန်းတာကို သည်းမခံနိုင်တော့လို့ ကိုယ့်ယောက်ျားကို သတ်မယ့်သူကိုတောင် မိတ်ဖွဲ့နိုင်တာကို ကြည့်လိုက်ရင် မွတ်စလင် အမျိုးသမီးတွေ မယားကြီး၊ မယားငယ်လုပ်ရတာကို မပျော်ပိုက်ကြဘူးဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ်။ ဒါကို အသေအချာနားလည်တဲ့ စင်ကာပူသားတွေက မင်းတို့ရဲ့ ‘မယားကြီးရဲ့ သဘောတူလက်ခံမှု’ ရရင် နောက်မိန်းမတစ်ယောက်ထပ်ယူပါ ဆိုတာဟာ ‘မယူနဲ့’ လို့ ပညာသားပါပါ တားထားတဲ့ ဥပဒေတစ်ရပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအတိုင်းဆက်သွားကြရင် တစ်ချိန်မှာ မြန်မာတွေနည်းပြီး မွတ်တွေများတဲ့ အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ တစ်မိသားစု ကလေး ၄ ယောက်ဆို ၄ ယောက် …. စသဖြင့် တိတိကျကျ သတ်မှတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဆရာဝန်၊ ဆရာမတွေရဲ့ အပြစ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အုပ်ချုပ်သူတွေနဲ့ နိုင်ငံရေး သမားများအားလုံး သေသေချာချာ လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားချင့် ချိန်ပြီး တိကျတဲ့ မူဝါဒတွေချမှတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ရှေးယခင်ကာလတွေတုန်းက ‘အိမ်ထောင်၊ သားမွေး’ဆိုတာ လူမှုရေးကိစ္စသက်သက် ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ယခု အခါမှာတော့ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး၊ နိုင်ငံရေးမက တိုင်းပြည်ရဲ့ အချုပ်အခြာ အာဏာနဲ့ပါ သက်ဆိုင်နေပြီဆိုတာကို သတိထားမိဖို့ လိုပါတယ်။
……. ”Islamic Republic of Singapore” ဆိုတဲ့ နိုင်ငံသစ်တစ်နိုင်ငံဟာ ဒီကမ္ဘာမြေမှာ ပေါ်ထွန်းလာခဲ့တာ အတော်လေးတောင်ကြာနေလောက်ပါပြီ။ စင်ကာပူမှာ လက်ရှိမွတ်စလင် ၁၅ % ရှိပါတယ်။ ၁၉၆၅ မှာ လွတ်လပ်ရေး ရခဲ့တဲ့ စင်ကာပူဟာ လွတ်လပ်ရေးရခါစတုန်းကလည်း မွတ်စလင် ၁၅% ၊ အခုလည်း ၁၅% ပါ။ မွတ်ရာခိုင်နှုန်းတွေလုံးဝ တိုးမလာပါဘူး။
ဇာတ်ပွဲတစ်ခုသွားကြည့်တာ ဇာတ်ကလည်းကောင်းမှကောင်း မင်းသားမင်းသမီးအရံ အို အစုံအလင်ကလည်း အချိတ်အဆက်မိမိနဲ့ ဇာတ်ရှိန်ကတဖြေးဖြေးမြင့်သည်ထက်မြင့်လာလို့ ဇာတ်ရုံထဲကကြည့်တဲ့သူတွေ ပတ်ဝန်းကျင်တောင်မေ့လောက်အောင် ဖြစ်လောက်တဲ့ထိ ဇာတ်ကကောင်းခဲ့တာလေ။ အဲလိုနဲ့ ဇာတ်သိမ်းခန်းပြီး ဇာတ်ပွဲပြီးတော့ မနက် ၅ နာရီပေါ့။
ဒါနဲ့ဘဲ အိမ်ပြန်ကြဖို့ ဇာတ်ရုံထဲက အပြင်ထွက်မယ်လဲဆိုရော ထွက်ခွင့်မပေးသေးဘူး ဆိုပြီး စစ်သားတွေက သေနတ်တွေနဲ့တားသဗျ၊ ဒါနဲ့မေးကြည့်လိုက်တယ် “ဘာလို့လဲ´´ဆိုတော့ “စစ်အာဏာသိမ်းပြီး ည ၆ နာရီ မှ မနက် ၆ နာရီ ညမထွက်ရ အမိန့်ထုတ်ထားလို့´´တဲ့ “ခင်ဗျားတို့တော့ ဘယ်သိလိမ့်မလဲ ဇာတ်ရှိန်ကောင်းနေတာကိုး´´တဲ့။
ကဲ ကောင်းရော ခရီးသည်ကြီးရေ။ ( ဟိုး တုန်းကအဖြစ်လေးပါ သတိရလို့ပြန်ရေးတာနော်)
ဦးကြီးမိုက်​ ၊ ဦးခင်​ခ မင်္ဂလာပါဗျ
ဝင်​ရခက်​တဲ့ရွာထဲ လာဖတ်​​ပေးတာ ​ကျေးဇူးပါဗျ
ဦးခင်​ခ​ပြောတဲ့ ဇတ်​လမ်း​လေးကို ပုံ​ဖော်​ပြီး တခုခု နားလည်​လိုက်​ပါတယ်​
ကျုပ်​တို့က​တော့ က လို့​ကောင်းတုန်း ….
သွား​လေဦး​တော့ တစ်​သက်​စာ ……
အိတ်ဖွင့်ပေးစာ ဆိုဒေါ့ …
အိတ်ပိတ် ပေးစာ မဟုတ်ဘူးပေါ့ ….
ခုလို ပြန်လည် ဆုံတွေ့ရတာ မင်္ဂလာပါ ….
ခရီးသည်ကြီး စီးသွားတဲ့ ရထားက မြို့ပတ်ရထားပဲ ဖြစ်ရမယ်လို့ အစတည်းက ထင်ခဲ့တာ …
ကဗျာဒေါ့ ဖတ်တွားဘာဒယ် .. ဘာမွှဒေါ့ မပေါဒေါ့ဘာဘူးရယ် …
ရထား ဘီး​ပေါက်​သွား လို့ပါကိုရင်​အံစာဒုံးရယ်​
When Buddhist Gone Bad
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဆိုးသွမ်းသော အခါ
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဘင်လာဒင်လို့ သမုတ်ခံရတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးရဲ့ မျက်နှာဟာ ရုပ်ပွားတော်တစ်ခုကဲ့သို့ တည်ကြည် ငြိမ်သက်လျက်စွာနဲ့ တရားကို စတင်ဟောကြားပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ရှေ့မှောက်မှာ ကိုးကွယ်သူ ရာပေါင်းများစွာဟာ လက်အုပ်ချီပြီး ထိုင်နေကြပါတယ်။ သူတို့တွေရဲ့ကျောပြင်မှာတော့ ချွေးတွေစီးကျနေပါတယ်။ တရားနာ ပရိတ်သတ်ကြီးက သင်္ဃန်းဝတ်ရဟန်းနဲ့အတူ ရွတ်ဖတ်သံတွေဟာ မန္တလေးမြို့ရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်းအတွင်းကနေ လွင့်ပျံ့နေပါတယ်။ မန္တလေးဟာ ရန်ကုန်မြို့ပြီးရင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့တော် ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ မြင်ကွင်းကတော့ စိတ်ကြည်နူးချမ်းမြေ့ဖွယ်ရာကောင်းပေမယ့် ဦးဝီရသူရဲ့တရားတွေကတော့ မုန်းတီးမှုတွေ ရောယှက်နေပါတယ်။ ”ခုချိန်ဟာ ငြိမ်သက်နေရမယ့် အချိန်မဟုတ်ပါဘူး။”ဟု သက်တော် ၄၆နှစ် အရွယ်ရှိ အဆိုပါဘုန်းတော်ကြီးက မြွက်ကြားပါတယ်။ မိနစ် ၉၀ လုံးလုံး တရားဟောကြားတဲ့အထဲမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာလူများစုရှိတဲ့နိုင်ငံမှာ လူနည်းစုမွတ်စလင်တွေကို မုန်းတီးဖို့ ထည့်သွင်းဟောကြားနေပါတယ်။ ”အခုအချိန်မှာ အားလုံး နိုးကြားနေဖို့၊ သတိရှိဖို့ လိုပါတယ်။”
မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာ သွေးပူနေကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် များစွာသော မွတ်စလင်သွေးတွေလည်း မြေခခဲ့ရပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အတွင်းက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လူရမ်းကား အုပ်စုတွေဟာ လူနည်းစုဘာသာဝင်တွေကို ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ အာဏာပိုင်တွေကတော့ မူဆလင်တွေ ဆယ်ဂဏန်းလောက် သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ ပြောသော်လည်း နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေး လုပ်ဆောင်သူတွေကတော့ သေဆုံးခဲ့တဲ့ အရေအတွက် ရာဂဏန်းအထိရှိတယ်လို့ သတ်မှတ်ခဲ့ ကြပါတယ်။ အဆိုပါ အကြမ်းဖက်မှုအများစုဟာ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ပစ်မှတ်ထားခဲ့တာပါ။ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အနောက်ပိုင်း အစွန်အဖျားမှာ နေထိုင်တဲ့ နိုင်ငံမဲ့မွတ်စလင်လူမျိုးစု ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂကနေ ယုံကြည်မှုအရ နှိပ်စက်ခံရဆုံး လူမျိုးစုအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရသူတွေပါ။ ထိုကဲ့သို့ သွေးထွက်သံယို အကြမ်းဖက်မှုတွေဟာ ဦးဝီရသူ နေထိုင်ပြီး သွေးထိုးလှုံ့ဆော်တဲ့ တရားတွေဟောကြားနေခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းအထိ ပျံ့နှံ့လာခဲ့ပါတယ်။ အစွန်းရောက် ဘုန်းကြီးတွေဟာ သန်း ၆၀ သော မြန်မာပြည်သူရဲ့ ၅ ရာခိုင်နှုန်းရှိတဲ့ မွတ်စလင်တွေကို နိုင်ငံနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကို ခြိမ်းခြောက်နေသူအဖြစ် ရှုမြင်ကြပါတယ်။ ”မွတ်စလင်တွေရဲ့ မွေးဖွားနှုန်းဟာ အရမ်းကိုလျင်မြန်ပြီး ကျွနု်ပ်တို့ရဲ့ သမီးပျိုတွေကို ခိုးယူနေကြပါတယ်။ အဓမ္မကျင့်ကြံနေကြပါတယ်။” ဟု ဦးဝီရသူက စာရေးသူကို ပြောပြပါတယ်။ ”သူတို့တွေက ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ နိုင်ငံကို သိမ်းပိုက်ဖို့ ကြံရွယ်နေကြပါတယ်။ ဒါကို လက်သင့်မခံနိုင်ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံကို ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံအဖြစ် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရမှာပါ။”
အာရှဟာ နယ်ချဲ့တွေနဲ့ ဖိနှိပ်မှုတွေကို ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့ အချိန်တုန်းက ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ သြဇာနဲ့ များပြားတဲ့ အရေအတွက်ကို အသုံးပြုပြီး နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွေကို ဦးဆောင်ခဲ့ကြဖူးပါတယ်။ အချို့သော ဘုန်းကြီးတွေဟာ နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေးအတွက် အသားအရေ ချုံးချုံးကျတဲ့အထိ အစာငတ်ခံကာ အသက်စတေးခဲ့ကြ ဖူးပါတယ်။ အထင်ရှားဆုံးလို့ ခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့ လုပ်ဆောင်မှု တစ်ခုကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၅၀ က တောင်ဗီယက်နမ် အစိုးရရဲ့ ဖိနှိပ်မှုကို ဆန့်ကျင်တဲ့ အနေနဲ့ ဆေးဂုံမြို့မှာ ဘုန်းတော်ကြီ Thich Quang Duc ရဲ့ တပလ္လင်ခွေထိုင်ပြီး မိမိကိုယ်ကို ဓာတ်ဆီလောင်းပြီး မီးရှို့ကာ အသေခံ ဆန္ဒပြမှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၇ ခုမှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားမှုတွေကို ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးတွေက ဦးဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဆိုပါ ဘုန်းတော်ကြီးတွေကို သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ စစ်သားတွေကလွဲလို့ အဲဒီ့ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ သပိတ်မှောက် ဆန္ဒပြမှုကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရဲ့ စာနာမှုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူမှုလှုပ်ရှားမှုတွေ အဆုံးသတ်ချိန်မှာ နိုင်ငံရေး စစ်သွေးကြွမှုတွေ ပေါ်ထွက်လာပါသလား။ ဘယ်ဘာသာရေးမဆို ၄င်းရဲ့အခြေခံ မူဝါဒတွေနဲ့ ဆန့်ကျင်တဲ့ အတွေးအခေါ်တွေရဲ့ လွှမ်းမိုးမှု ခံသွားရရင် အဖျက်အင်အားတစ်ရပ်အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။ အခုအချိန်ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အလှည့် ရောက်လာပါပြီ။
မန္တလေးမြို့ရှိ မစိုးရိမ်တိုက်သစ်တွင် တပလ္လင်ခွေချိတ်ထိုင်လျက် လူအရွယ် ၄င်း၏ဓာတ်ပုံများ ချိတ်ထားသော နံရံရှေ့ စင်မြင့်ပေါ်မှ ဦးဝီရသူက သူ၏ကမ္ဘာ့အမြင်ကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်သမ္မတ ဘားရက်အိုဘားမားဟာ အနက်ရောင် မွတ်စလင်သွေး စွန်းနေတဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂကို အာရပ်တွေက လွှမ်းမိုးထားတယ်လို့ သူယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အာရပ် အကြမ်းဖက် သမားတွေနဲ့ သူ့ကိုယ်သူ နှိုင်းယှဉ်ပြတာကိုတော့ အပြစ်မမြင်ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ မွတ်စလင် ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာ အစွန်းရောက် လူဆိုးတွေ ဖြစ်တယ်လို့ ဦးဝီရသူက ပြောပါတယ်။ ၄င်းဟာ မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့ ၂၀၀၃ ခုနှစ်က ထောင်ဒဏ် ချခံရဖူးသူ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ အခုအချိန်မှာ ဗုဒ္ဓရဲ့ ဂုဏ်ရည်တွေကို ဖော်ညွှန်းတဲ့ သင်္ကေတဖြစ်တဲ့ ၉၆၉ ဆိုတဲ့ နံပါတ်ကို အသုံးပြုပြီး လှုပ်ရှားမှု တစ်ခုကို ခုချိန်မှာ ဦးဆောင်လုပ်ကိုင် နေပါတယ်။ အဲဒီ့လှုပ်ရှားမှုဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အားလုံး သွေးစည်းညီညွတ်ဖို့ လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ ”အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို စောင့်ရှောက်ရေးဟာ ဒီမိုကရေစီရေးထက် ပိုပြီးအရေးကြီးတယ်လို့” သူက ပြောပါတယ်။
မတ်လကုန်လောက်မှာ မိထ္ထီလာမြို့ရဲ့ အဝေးပြေး ကားဝင်းအနီးမှာ နေ့ပေါင်းများစွာကြာအောင် မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါး အသတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာ မွတ်စလင် ရပ်ကွက်တွေကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လူအုပ်တွေက ၀င်ရောက်ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ (တရားဝင် ထုတ်ပြန်ချက်များအရ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် နှစ်ဦးနဲ့ မွတ်စလင် အယောက် ၄၀ အသတ်ခံရတယ်လို့ သိရပါတယ်။) မွတ်စလင် ထောင်ပေါင်းများစွာကိုတော့ ဒုက္ခသည် စခန်းတွေအတွင်း ထားရှိခဲ့ပြီး သတင်းထောက်တွေ ၀င်ခွင့်မရရှိခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်မက ၁၅ နှစ်အရွယ် Abdul Razak Shahban ရဲ့ မိသားစုနဲ့ တွေ့ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ ၁၅ နှစ်သားဟာ အသတ်ခံရတဲ့ ဒေသခံကျောင်းသား အယောက် ၂၀ ထဲက တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ရာဇတ်ကိုယ်တိုင်လည်း သူ့ရဲ့ခေါင်းကို သံချွန်နဲ့ အရိုက်ခံရပြီး သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ”ကျွန်မသားဟာ မွတ်စလင်ဖြစ်လို့ အသတ်ခံရတာပါ။ တခြားဘာအကြောင်းကြောင့်မှ မဟုတ်ပါဘူး။” ဟု ရာဇတ်ရဲ့ မိခင်က ဗလီတစ်ခုရဲ့ ပြာပုံဘေးမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အစ္စလာမ်ကို လက်စားချေလိုစိတ်နဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ လွှမ်းမိုလိုမှုတို့ကြောင့် Bodu Bala Sena (BBS) ဆိုတဲ့ အဖွဲ့အစည်းကို သီရိလင်္ကာမှာ ထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာအင်အားစု တပ်မတော်လို့ အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ အဆိုပါ အဖွဲ့ဟာ သီရိလင်္ကာမှာ အင်အားအကြီးဆုံး ဗုဒ္ဓဘာသာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလမှာ ကျင်းပတဲ့ အဆိုပါ အဖွဲ့ရဲ့ နှစ်ပတ်လည် ညီလာခံကို မြို့တော် ကိုလမ်ဘိုအနီးမှာ ကျင်းပခဲ့ပြီး ဘုန်းကြီးအပါး ၁၀၀ ကျော်ကနေ ဦးဆောင်ပြီး မြို့ကိုလှည့်ပတ်ခဲ့ပါတယ်။ အခြားကိုးကွယ်သူတွေကလည်း သာသနာ့အလံတွေ ကိုင်ဆောင်ပြီး ညာလက်တွေကို ရင်ဖက်မှာကပ်ပြီး သာနာကို ကာကွယ်ဖို့ သစ္စာဆိုကြပါတယ်။ လွန်ခဲ့သည့် တစ်နှစ်ကျော်ကမှ တည်ထောင်ခဲ့သည့် ယင်းအဖွဲ့က ကမ္ဘာ့သက်တမ်းအရှည်ဆုံး ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ သီရိလင်္ကာမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ အမြစ်တွယ်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ခံယူထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အစိုးရကျောင်းတွေမှာ ဘုန်းကြီးတွေကို သမိုင်းဘာသာရပ် သင်ကြားစေပြီး ဆာရီဝတ်ဆင်မှုကို ဥပဒေအရ ပိတ်ပင်ဖို့ တောင်းဆိုကြပါတယ်။ တကယ်တော့ သီရိလင်္ကာ လူဦးရေရဲ့ ၉ ရာခိုင်နှုန်းဟာ မွတ်စလင်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ BBS ရဲ့ အထွေအထွေ အတွင်းရေးမှူးနဲ့ ဘုန်းကြီးဖြစ်သူ Galaboda Aththe Gnanasara Thero က နှစ်ပတ်လည် ညီလာခံတွင် ”ဒါဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ အစိုးရ၊ ဒါဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံတော်။” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
BBS အဖွဲ့ဝင်တွေလို သဘောထား တင်းမာတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေက ၂၆ နှစ်ကြာ တမီးလ် အီလန် ဟိန္ဒူ ကျားသူပုန်တွေကို လွန်ခဲ့တဲ့ လေးနှစ်အကြာက ရှင်းလင်းပြီးတဲ့နောက်မှာ လူနည်းစု မွတ်စလင်နဲ့ ခရစ်ယာန်တွေဘက်ကို များဦးလှည့်လာပါတယ်။ ရှေးရိုးစွဲ သမ္မတ Mahinda Rajapaksa ကို ၂၀၀၅ ခုနှစ်က ရွေးကောက်ခံရပြီးတဲ့အချိန်မှာ အစွန်းရောက် ဗုဒ္ဓ၀ါဒီ အုပ်စုတွေဟာ ပိုမိုအင်အား ကြီးမားလာခဲ့ပါတယ်။ မကြာသေးမီ လများအတွင်းက သူတို့ရဲ့ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုတွေမှာ မွတ်စလင်ပိုင် အထည်ဆိုင်၊ ခရစ်ယာန် သင်းအုပ်ဆရာပိုင်အိမ်နဲ့ မွတ်စလင် သားသတ်ရုံတစ်ခုကို ၀င်ရောက်စီးနင်းမှုများ ပါဝင်ပါတယ်။ ဘုန်းကြီးတွေကိုယ်တိုင် ဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာ ပါဝင်ကြောင်း ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေ တွေ့ရှိသည့်တိုင်အောင် မည်သူ့ကိုမျှ အရေးယူခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ တကယ်တော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေနဲ့ နိုင်ငံတော် အစိုးရဟာ သီရိလင်္ကာမှာ တစ်နေ့တစ်ခြား ပိုပြီးနီးကပ် လာနေပါတယ်။ ဘုန်းကြီးတွေ ကြီးစိုးတဲ့ ပါတီကိုယ်တိုင်က ညွန့်ပေါင်းအစိုးရတွင်းမှာ ပါဝင်နေပါတယ်။ မတ်လတွင်းက BBS က တည်ထောင်ထားတဲ့ Buddhist Leadership Academy ရဲ့ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာ အထူးဧည့်သည်တော်အဖြစ် ဖိတ်ကြားခံရသူဟာ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Gotabhaya Rajapaksa ဖြစ်နေပါတယ်။ သူက လက်ရှိသမ္မတနဲ့ ညီအစ်ကိုတော်စပ်သူ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဖွင့်ပွဲမှာ ”ဘုန်းကြီးတွေက အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက် နေတာပါ” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ တောင်ဘက်အစွန်းပိုင်းက ဘုန်းကြီးတွေဟာ အကူအညီ လိုအပ်နေပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကြောင့် အချို့ဟာ ဗုဒ္ဓရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးတရားနဲ့ ဆန့်ကျင်လုပ်ဆောင် လာကြပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာစုနှစ် အစောပိုင်းက ထိုင်းနိုင်ငံကနေ မသိမ်းပိုက်ခင် အချိန်အထိ Pattani, Yala နဲ့ Narathiwat ဒေသတွေဟာ ယခင်က မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ လက်အောက်ခံ ဆူလတန်အဖြစ် ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ့ ဒေသတွေရဲ့ လူဦးရေ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းဟာ မွတ်စလင်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာ ခွဲထွက်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွေ အင်အားကြီးမား လာချိန်မှာတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်မှုတွေ ရှိလာပါတယ်။ သူတို့တွေဟာလည်း အစိုးရနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကျောင်းဆရာတွေ၊ စစ်သားတွေနဲ့ အခြားပြည်သူ့ ၀န်ထမ်းတွေ ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ ဘုန်းကြီးတွေကိုလည်း တိုက်ခိုက်မှုတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ အခုချိန်မှာ ထိုင်းစစ်တပ်နဲ့ အခြားလုံခြုံရေး အင်အားစုတွေဟာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေထဲကို ၀င်ရောက်နေရာ ယူထားကြပါတယ်။ ထို့အပြင် မနက်ပိုင်း ဆွမ်းခံထွက်ချိန်မှာ စစ်သားတွေက ဘုန်းတော်ကြီးတွေ ဘေးကနေ ခြံရံလိုက်ပါ ပေးကြပါတယ်။ ”ကျွန်တော်တို့မှာ ရွေးစရာ မရှိပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို လက်နက်နဲ့ ခွဲခြားလို့ မရတော့ပါဘူး” လို့ စစ်ဗိုလ်ဖြစ်သူ Sawai Kongsit က ပြောပါတယ်။
Pattani မြို့ရှိ Lak Muang ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ သီတင်းသုံးနေတဲ့ ဘုန်းကြီး ၁၁ ပါးရှိပြီး စခန်းချ နေထိုင်တဲ့စစ်သား အယောက် ၁၀၀ လောက် ရှိပါတယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင်းရှိ ဘုရားစေတီမှာ ထိုင်းခြေလျင်တပ်ခွဲ အမှတ် ၂၃ အတွက် ယာယီစစ်စခန်းတစ်ခု ချထားပြီး စေတီရဲ့ ပတ်လည်မှာ ရွက်ဖျင်တဲတွေ ထိုးထားကြပါတယ်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ထောင်ပေါင်းများစွာဟာ အဆိုပါ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ပြည်သူ့စစ်သင်တန်း တက်ရောက်ကြပါတယ်။ အဆိုပါ ဘုန်းကြီးကျောင်းရဲ့ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ဖြစ်တဲ့ ၀ါတော် ၁၆ ၀ါရ Prapaladsuthipong Purassaro က သင်္ဃန်းစစည်းတဲ့ အချိန်ကစလို့ ပစ္စတိုသုံးလက် ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ပြောပါတယ်။ ”ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တစ်ဦးအနေနဲ့တော့ အပြစ်မကင်းဘူးလို့ ခံစားမိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဦးဇင်းတို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်ဖို့ လိုပါတယ်။” လို့ ပြောပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ အနေနဲ့ စစ်သားတွေ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင်းမှာရှိမှ လုံခြုံတယ်လို့ ခံစားရမယ်ဆိုရင် မွတ်စလင် လူထုအတွက်တော့ တခြားအဓိပ္ပာယ် သက်ရောက်နေပါတယ်။ ”စစ်သားတွေ ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲကို ဖိတ်ခေါ်ခြင်းဟာ ဘာသာရေးနဲ့ စစ်တပ်ကို ရောထွေးလိုက်တာပါပဲ။” လို့ အိုင်ဟိုင်းရိုး တက္ကသိုလ်မှ လက်ထောက်ကထိကနဲ့ ထိုင်းတောင်ပိုင်း ဘာသာရေး ပဋိပက္ခအကြောင်း စာအုပ်ရေးသားသူ Michael Jerryson က ပြောပါတယ်။ ”ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက ကျွန်မတို့ ထိုင်းလူမျိုး ဖြစ်တယ်လို့ ဘယ်တော့မှ သတ်မှတ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါကျွန်မတို့ရဲ့ နိုင်ငံပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့ကို လူစိမ်းတွေကို ဆက်ဆံနေကြပါတယ်။” လို့ အခြားအကြမ်းဖက်မှုဖြင့် သံသယရှိသူ ၁၅ ဦးနှင့်အတူ ထိုင်းနိုင်ငံ ရေတပ်စခန်းတစ်ခုကို ၀င်ရောက်စီးနင်းစဉ်က အသတ်ခံရသူ၏ မိခင်ဖြစ်သူ Sumoh Maken က ပြောပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ မွတ်စလင်တွေလည်း တောင်ပိုင်းမှာ ကြောက်ရွံ့နေကြပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ အကြမ်းဖက် ခံရမှုတွေမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေထက် ပိုပြီးသေဆုံးကြပါတယ်။ ဗုံးခွဲမှုတွေနဲ့ အစိုးရနဲ့ ပတ်သက်တယ်ဆိုတဲ့ ကောလဟာလတွေကြောင့် အသတ်ခံနေကြရပါတယ်။ (လူဦးရေ အချိုးအရ ပြန်ကြည့်ရင်တော့ သေဆုံးတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အရေအတွက်က ပိုများပါတယ်။) ဒါပေမယ့် ဘုန်းကြီးတိုင်း ဘုန်းကြီးတိုင်းက ဗလီတွေမှာ လက်နက်တွေ ဖွက်ထားတယ် ဒါမှမဟုတ် ဗလီဆရာတိုင်း သေနတ်ကိုင်ဆောင်ကြတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ”အစ္စလာမ်ဟာ အကြမ်းဖက်မှုကို အားပေးတဲ့ ဘာသာတစ်ခု ဖြစ်တယ်။ ဒါကို လူတိုင်းသိပါတယ်။” လို့ စစ်သားလူထွက် ဘုန်းကြီးဖြစ်သူ Phratong Jiratamo က ပြောပါတယ်။
ဒီလိုသဘောထားဟာ မြန်မာဘင်လာဒင် ထောက်ခံမယ့် ရပ်တည်ချက်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မအနေနဲ့ ဦးဝီရသူဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ မွတ်စလင် ဆန့်ကျင်ရေး အကြမ်းဖက်မှုကို သူ့ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ဘာသာရေး နည်းလမ်းအရ ဘယ်လို လက်ခံနိုင်သလဲဆိုတာ စဉ်းစားမိပါတယ်။ ”ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ဦးဇင်းတို့ကနေ အကြမ်းဖက်လို့တော့ မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်အသိုင်းအ၀ိုင်းကို ကာကွယ်ပိုင်ခွင့် ရှိပါတယ်။” လို့ ဦးဇင်းက ပြောပါတယ်။ ညနေပိုင်းတွင် ဦးဝီရသူက တရားနာ ပရိသတ်တွေကို ဟောကြားရာတွင် ပြုံးရွှင်နေတဲ့ အိမ်ရှင်မတွေ၊ ကျောင်းသားတွေ၊ ဆရာ ဆရာမတွေ၊ အဖွားအိုတွေနဲ့ အခြားတရားနာ ပရိသတ်တွေကို သူ့နောက်ကနေ ရွတ်ဆိုခိုင်းတာကတော့ ”ဗမာလူမျိုးစုအတွက် အသက်ပေး စွန့်လွှတ်ပါမည်။” ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ ခွင့်လွှတ်မှု စိတ်ဓာတ်ဟာ လူနည်းစုမှာသာ ကျန်ရှိနေပါတော့တယ်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တုန်းက Lak Muang ဘုန်းကြီးကျောင်းက ဘုန်းတော်ကြီး Watcharapong Suttha ဟာ စစ်သားတွေ ခြံရံပြီး မနက်ဆွမ်းခံ ကြွချိန်မှာ ဗုံးတစ်လုံး ပေါက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။ ဘုန်းကြီးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အောက်ပိုင်းဟာ ဗုံးဆံတွေကြောင့် အမာရွတ်တွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေပါတယ်။ အခု အသက် ၂၉ နှစ်ရှိပြီး လူထွက်လိုက်တဲ့ အချိန်ထိတိုင်အောင် ကျီးကန်းတောင်းမှောက် မျက်လုံးတွေ၊ ချုပ်ရာအပြည့်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တွေကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှု ခံစားနေရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူဒီလို တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက် အစ္စလာမ်ဘာသာ တစ်ခုလုံးကို အပြစ်မတင်ပါဘူး။ ”အစ္စလာမ်ဆိုတာ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ဘာသာတစ်ခုပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ တခြားဘာသာတွေ လိုပါပဲ။ မွတ်စလင်တွေကို အပြစ်တင်နေရင် သူတို့ကလည်း ကျွန်တော်တို့ကို အပြစ်ပြန်တင်မှာပဲ။ ဒီလိုဆိုရင် အကြမ်းဖက်မှု သံသရာ ဘယ်တော့မှ ဆုံးမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ပြောဖို့မေ့သွားလို့ Eleven Media က ပိုစ်ဖြစ်ပါတယ်။
ရှာ​ဖွေ ထုတ်​​ဖော်​​ပေးတာ ​ကျေးဇူးပါဗျ
အားလုံး ကောင်းပါသည်ခင်ဗျား ပေါ့ဗျာ
ဂလိုနဲ့ပဲ ကျုပ်နဲ့ ထွီဇာလေး ဝေးဂျရဒေါ့မှာလားဗျာ..
ဒီ အိတ်ဖွင့်ပေးစာကို အရှင်ဘုရားမပြောနဲ့။
သူ့ ဒကာ ဒကာမတွေ ကိုသွားပေးရင်တောင် ဆဲ လွှတ်ကိန်းမြင်ပါတယ်၊ ခရီးသည်ကြီးရယ်။
ကဗျာကတော့ အတော့ကို ကောင်းပါသည်။